कहिले हुन्छ सिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ बाँडफाँट ? यसाे भन्छ क्यापिटल - DURBAR TIMES
HomeEconomyकहिले हुन्छ सिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ बाँडफाँट ? यसाे भन्छ क्यापिटल
कहिले हुन्छ सिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ बाँडफाँट ? यसाे भन्छ क्यापिटल
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओ बाँडफाँट यसै साताभित्र हुनसक्ने सम्भावना रहेको बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलले जानकारी गराएको छ । मेगा क्यापिटलका अनुसार आवेदन रुजु गर्ने काम अझै बाँकी रहेका कारण मिति टुंगो लाग्न भने सकेको छैन । रुजुको काम सकिएमा यसै साता बाँडफाँट हुने र नसकिएमा अर्को साता लाग्ने बिक्री प्रबन्धको भनाई छ ।
यता, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै पर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ । यसमा कुल २ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । १६ लाख ३५ हजार ५३७ जनाले २ करोड ४६ लाख ६५ हजार ६४० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो मागको तुलनामा ९.३४ गुणा बढी हो ।
यसआधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको २६ लाख ९४ हजार कित्तालाई आधार मान्दा २ लाख ६४ हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने देखिएको छ । १३ लाख ७१ हजार ५३७ जना भन्दा धेरै जना भने आइपीओ पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् । सिंगटीले चैत ६ गतेबाट १० गतेसम्म १०० रुपैयाँ दरको कुल २९ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
Previous articleनेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट
Next articleफुटबल नराेजेकाे भए मलाइ विराज महर्जन भनेर कसैले चिन्दैनथे । फुटबललाइ म भगवान् मान्छुः विराज